Khudbad jeedinta musharixiinta Koonfur galbeed oo bilaabatay • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Koonfur Galbeed / Khudbad jeedinta musharixiinta Koonfur galbeed oo bilaabatay
Khudbad jeedinta musharixiinta Koonfur galbeed oo bilaabatay
December 16, 2018 - By: Mohamed Jeenyo
Waxaa goor dhawayd magaalada Baydhabo ka bilaabatay khudbad jeedinta musharixiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Koonfur galbeed.
Ilaa iyo hada waxaa khudbad jeediyay musharixiin gaaraya 4 musharax kuwaas oo ka sheekeeyay waxqbadadkooda iyo sooyaalkooda siyaasadeed ee maamulka Koonfur galbeed.
Khudbad jeedintan oo bilaabatay xili labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay magaalada Baydhabo ka taagnayd xaalad kacsanaan ah ayaa waxaan sidoo kale qeyb ka ahayn khudbadaha Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur kaas oo kamid ahaa musharixiinta Koonfur galbeed balse haatan uu maxbuus u yahay dowlada Federaalka Soomaaliya.
Dhinaca kale Guddiga Doorashada maamulka Koonfur galbeed ayaa horay u iclaamiyay in illaa saddex Musharax ay maanta khudbado jeedin doonaan iyadoona sida qorshuhu yahay maalinta berri ahna ay khudbado jeedin doonaan musharax C/casiir Lafta Gareen iyo musharixiin kale.
Si kastaba ha ahaate 19-bishan oo ku beegan maalinta Arbacada ah ee soo socota ayaa la filayaa in magaalada Baydhabo ay ka qabsoomto doorashada madaxweyne ee koonfur galbeed iyadoo ay xusid mudan Tahay in dhowr jeer oo hore ay dib u dhacday doorashada.